काेराना खाेप लगाउनु भएकाे छैन? छैन भने आजै भर्नुस फाराम – Bikash Khabar
काेराना खाेप लगाउनु भएकाे छैन? छैन भने आजै भर्नुस फाराम
शनिबार, ०१ जेठ २०७८ गते १३:४४ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	176 Views
काठमाडौँ, १२ जेठ । भगवान् विष्णुको नवौँ अवतारका रुपमा जन्म लिनु भएका सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पु¥याउनुभएको योगदानको स्मरण
विदेशी मुद्राको विनिमयदर: कुन देशको कति ?
भारतमा थप ३ लाख २६ हजार नयाँ संक्रमित थपिए